လူသားအားလုံးအတွက်: ရွှေဂုံတိုင် သံဃဆေးရုံရှေ့၌ ၂၃၅ ဘီအမ် တိမ်းမှောက်၊ စပယ်ယာနှင့် ခရီးသည်အမျိုးသမီး ၂ ဦး သေဆုံး
ရွှေဂုံတိုင် သံဃဆေးရုံရှေ့၌ ၂၃၅ ဘီအမ် တိမ်းမှောက်၊ စပယ်ယာနှင့် ခရီးသည်အမျိုးသမီး ၂ ဦး သေဆုံး
Posted by နေဇော် လင်း at 11:10 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မြန်မာပြည်မှာ မနေချင်ဆုံးကိစ္စထဲမှာ ဘစ်ကားပြသနာလဲ ပါတယ်.
ခရီးသည် တွေကိုပဲ သနားလို့ မဆုံးဘူး။။
ကိုယ်တွေနေခဲ့တုန်းကလဲ ညနေ လူစုံအိမ်ရောက်မှပဲ အသက်၀၀ရှုရဲတယ်။
တခါများဆို ကားကဘယ်ဘက်တခြမ်းထဲက ဘီး၂လုံးနဲ့ စောင်းပြီးသွားနေတာ တမိနစ်လောက်တော့ရှိမယ်. မျက်စေ့စုံမှိတ်ပြီး ဘုရားစာအသံကုန်အော်ရွတ်မိတဲ့ အထိပဲ၊
နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ ကျောင်းသွားတိုင်း အလုပ်သွားတိုင်း အသက်ကို အပေါင်ထား သွားနေရသလိုခံစားခဲ့ရတယ်။
ကိုယ်ကလဲ ဘစ်ကားပဲ စီးနိုင်တာကိုးလေ....
အာဖဂန်တောင်ပိုင်းရှိ အကြီးဆုံးမြို့ ကန်ဒါဟာတွင် မြ...
အရေးပေါ် လူနာများကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ သာမက အ...
ရွှေဂုံတိုင် သံဃဆေးရုံရှေ့၌ ၂၃၅ ဘီအမ် တိမ်းမှောက်၊ ...
Wordspress မြန်မာ ဘာသာ စာမျက်နှာ သစ်နှင့် အတူ မြန်...
လုပ်ငန်းရှင်တွေက သူမနဲ့ ကြော်ငြာရင် ရောင်းအား ကောင...
ထူးထူးခြားခြား တလင် နှစ်မယား ( အားလုံးကြည့်ရန်)
မောင်ထိပ်ကွက်အား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူ ထောင် ၇ နှစ်က...
မလေးရှားရောက် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် တရားတော...
မလေးရှား အိုဗာစတေး သမားများ ရော အမှန်များအားလုံး အ...
မလေးရှားတွင် မူကြိုကျောင်းသားများနှင့် ဆရာများကို ...
အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူ ထောင်ကျော် မလေးရှား အာဏ...
မလေးရှား ဆန္ဒပြပွဲ ပုံရိပ်များ
သင့် လက်ကိုင် ဖုန်းဖြင့် ဝိတ်ချ လိုပါသလား ....
ဆရာမျိုးဟန်ကို - 2011, July လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း...
ဟင်္သာတမြို့တွင် ကလေးငယ်အား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူ လက်...
ယုံကြည်မှု ရှိစွာနဲ့ ကြည်လင် ဝင်းပတဲ့ မျက်နှာကို ပိ...
ဗြိတိန် တော်ဝင်မိသားစု အသုံးစရိတ်မှာ ထုတ်ပြန်ထားသ...